Fihaonambem-paritry ny HVM : Mpizaika 10.000 hikaon-doha ao Toliara -
AccueilRaharaham-pirenenaFihaonambem-paritry ny HVM : Mpizaika 10.000 hikaon-doha ao Toliara
Fikaonan-doha goavana eo anivon’ny antoko Hery Vaovao ho an’i Madagasikara na HVM no hotanterahina ao Toliara anio sy rahampitso. Fihaonana rezionalin’ny HVM, raha ny marimarina kokoa, ka anjaran’i Toliary sy ny Faritra Atsimo Andrefana indray no mampiantrano izany.
Raha ny fanazavan’ny mpitondra tenin’ny antoko sady mpikambana eo anivon’ny kaomity mpikarakara nasionalin’ny fihaonambem-paritry ny HVM, Guy Laurent Ramanakamonjy, mpizaika manodidina ny 10.000 avy amin’ny faritra 22 no handray anjara amin’ity fihaonana ao Toliara ity. Mpizaika 8.000 amin’izany avy ao Toliara ary ny 2.500 kosa avy amin’ireo Faritra. « Efa saika aty Toliara ny 40%n’ny mpizaika amin’izao fotoana izao. Hanomboka amin’ny fomba ôfisialy ny hetsika anio ary hitohy hatramin’ny rahampitso izany », hoy ity mpitondra tenin’ity HVM ity.
Voalaza fa hanombohan’izy ireo ny fihaonana, ny fikaonan-doham-baomiera ka lohahevitra lehibe telo no hodinihina sy hitadiavam-bahaolana ary hamahana fehin-kevitra amin’izany. Ny voalohany, ny fanaovana tomban’ezaka ny efa vita sy ny mbola miandry eo anivon’ny antoko, toy ny fotodrafitrasa, ny fitantanana ary ny famokarana, sns. Manaraka izany, eo amin’ny faharoa kosa indray, ny mikasika ny antoko HVM sy ny fanomanana ny fifidianana. Fahatelo farany, ny tetikasa mikasika indrindra ny lafim-piarahamonina.
Vita izay rehetra izay, raha ny nambaran’ny mpitondra tenin’ny antoko HVM hatrany dia hisy ny fanolorana ny fehin-kevitra nivoitra tamin’ireo lohahevitra goavana telo nodinihin’ny asam-baomieran’ ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina.
Ankoatra izay, miara-mizotra amin’ity fihaonambem-paritra ao Toliara ity ihany koa ny fankalazana ny fahatelo taona nijoroan’ny antoko HVM. Araka izany, hisy ny fety govana hiarahana amin’ireo mpizaika sy ireo mpandray anjara rehetra ary ny mponina ao Toliara sy ny manodidina. Anisan’izany ny fisian’ny « carnaval » goavana mihodidina ny tampon-tanànan’i Toliara ka mifarana ao amin’ny kianja mitafo Toliara, izay hanatanterahana ny fihaonambe. Manaraka izany, hisy ihany koa ny fifaninanana isan-karazany eo amin’ny « cyclo-pousse », ny hazakazaka am-bisikileta sy lapihazo hiarahana amin’ny mpanakanto maro, sns. Hamaranan’ny mpikarakara ny hetsika kosa ny alim-pandihizana goavana hanasana sy hiarahana amin’ireo olo-manan-kaja maro isan-tokony.
Hiavaka, araka izany, hoy hatrany ny mpitondra teny sady mpikarakara nasionalin’ny fihaonambem-paritra, ity fihaonan’ny antoko ao Toliara ity. Voalaza ihany koa fa i Mahajanga indray no mampiantrano ny hetsika aorian’ity ao Toliara ity.
MN sy Tantely Andriamalala (Toliary)